Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2012 |
Inona koa no andehanana eny ambohijatovo?
2012-04-28 @ 09:22 in Politika
Somary malazalaza izao handehanana eny Ambohijatovo anio [28 avrily 2012] izao. Samy manontany izay antony andehanan'ny ankolafy Ravalomanana eny ny rehetra. Nolazain'ny parlemantera moa fa hanaovana tatitra amin'ny vahoaka no hanaovana azy. Antony avoaka ofisialy ihany izany fa heveriko ho fitadiavana antony ialana amin'ny rafitra isan-karazany nidirana ary hiditra amin'ny fidinana an-dalambe ho fanoherana mahery vaika kokoa, ary tokony izany ihany. Izaho manokana manko tsy mahita intsony izay mbola ifikirana amin'ny rafitra rehefa tsy tratranao ny tanjona tokana nokendrena hatramin'ny voalohany indrindra dia ny hamerenana ny filoha Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray, ary amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny besinimaro anjara izany. Rehefa tsy hanao izany ireo mpitarika rehetra ao amin'ny ankolafy Ravalomanana dia namadika tanteraka ny tolona amiko. Reseo lahatra amin'izay mifanohitra amin'izany aho.
Raha ny fanaony hatrizay, tsy hanaiky ny hamoriana vahoaka eny Ambohijatovo na 13 mey izany ny fitondrana amin'ny alalan'ny prefektiora. Tsy maintsy handrava ny fihetsiketsehana eny ny miaramila sy ny zandary ary ny polisy raha izay fanao mahazatra izay no raisina. Miainga avy amin'izay noho izany no tokony nanaovana ny tetika itadiavana antony hialana amin'ny rafitra mitongilana sy manome vahana ny nandroba-pahefana. Rehefa miala dia miala tanteraka fa tsy manao sarimihetsika mody mivoaka ny trano, manasa tanana toa an'i Pilato hoe tsy nandany azy tao aho an, nefa averimberin'ny fanambaram-pinoana isaky ny alahady hoe "Nijaly fony nanapaka Pontio Pilato", dia avy eo miverina maka seza noho ny fitadiavana mandrakariva ilay tombontsoa sy karama be raisina isam-bolana eo amin'ny sezam-boninahitra.
Noho izany, raha mbola manao izay fanaony mandrava fihetsiketsehana izay ny mpitana fitaova-piadiana, dia tafiditra anatin'ny fandrika nomanina, araka ny eritreritro eo ambony. Raha aorian'ity fotoana ity no miala daholo ny tompon'andraikitra ao amin'ny ankolafy, mino aho fa hiverina amin'izy ireo ny fitokisan'ny olona; fa raha tsy misy ny fialana ofisialy, heveriko fa heverin'ny olo-tsotra mpitolona rehetra ho mpamadika avokoa ireo mpitarika rehetra ireo. Tsy ilaina intsony ny fanilihana andraikitra hiandry izay fanapaha-kevitry ny SADC izay tsy hiraharaha anao intsony.
Raha mamela malalaka kosa dia karazany voafandrika ihany ny mpitarika ny ankolafy nefa fanararaotra izany hamoriana ny olona indray ny talata voalohany volana mey, sy hidinana eny an-arabe, rehefa tsy hanao izany intsony ny sendikà amin'io andro fanararaotra hanaovana fihetsiketsehana io, satria tokony ho ny sendikà no manao fihetsiketsehana isaky ny mandalo io vanim-potoana io. Na ahoana izany na ahoana tokony ho ainga vaovao amin'ny tolona ity andro anio ity na mahomby na tsia. Tsy maintsy ho tafapaka any amin'ny olona hatrany fa miala anaty rafitra ianao rahariva ary hanao fidinana an-dalambe ny voalohany volana mey. Zavatra mandeha ho azy izay eritreritro izay fa tsy fantatro aloha izay tena any an-tsain'ireo mpitarika rehetra ireo.
Ninia tsy namoaka izao resaka izao aho raha tsy efa nihoatra ny tamin'ny folo ora nifanarahan'ny mpitolona. Samia mamakafaka sy mieritreritra. Vaovao hafa eny an-tsisiny: somary namoaka bolongana hafa ialana voly ny tena amoahana izay mahafinaritra sy hita tany an-kafa ary manomboka mamoaka tononkalo ezahina hivoaka isan'andro any amin'ilay bolongana voalohany natsangako. Mazotoa mitsidika ireo sehatra roa ireo.
2012-04-19 @ 01:26 in Ankapobeny
Ity lahatsoratra ity dia mifandrohy sy mifampitohy avy amin'ity lahatsoratra iray hafa ato ity. Efa nosoratako ary fa efa ela no nitadiavako ity hira ity sy ny tonony ahafantarako izay dikany ka hitako ihany na ny hira na ny tonony izay nadikako ho amin'ny teny malagasy azonao ahitsy.
Nohazavaiko fohifohy fa tsy misy fiankinana amin'ny hery ivelan'ny hery sy fahaizan'olombelona no tena votoatiny azo asandratra anatin'ny tononkira ary eto an-tany ihany no paradisa. Raha te-hahita azy marina ianao dia tsindrio ny rohy etsy ambony.
Rehefa nahare aho dia mitodika any amin'ny antony nandraisana ny hira indray aho ho hiram-pitolomana tamin'ny 2009. Inona no tena nandraisana azy? Somary efa nanaitra ny tena ihany ny mahita ny anaran'ny haino aman-jery mpanohana ny filohan'ny FAT (hatramin'izao) saiky manomboka amin'ny V avokoa, tahaka ny hoe Viva, la Verité, inona ny Vaovao... Misy ny sarimihetsika antsoina hoe V tahaka ny Valifaty... izay nalaina avy amin'ny tantaran'i Guy Fawkes, ilay katolika nankahala ny fanjakana protestanta tao Angletera ka naleony miaramilan'i Espaina. Efa nivoaka sarimihetsika izany tantara izany. Fa sarimihetsika ihany koa ny 1492, tantaran'i Colombus nahita an'i Amerika sy fanombohan'ny nahahenika ny Espaniola nanerana ny kaontinanta ary heverina ho tsy ho tafala ao intsony...
Viva teny espaniola, V ahafantarana ilay anglisy (heverina ho protestanta) nanao miaramilan'i Espaina (heverina ho katolika) efa noteneniko anarana etsy ambony ihany. Raha ireo no jerena dia miaina sy mpanaraka sarimihetsika fatratra ny mpanao ny tetipanorona ao amin'ny fitantanana amin'izao fotoana. Raha ny votoatin'ny hira efa volaza etsy ambony toa miankina amin'ny heriny ihany ry zareo, na miankina amin'ny herin'olombelona (hafa) sy ny hery avy amin'ny fisainan'olombelona. Koa raha hifanandrina amin'izao hery sy fahefana izao, hahavita ankoatra ny fandravana ve? Raha ny toy izany ihany, toa tsy kely ny fanantenako fa tonga amin'ny fotoanany indrindra ny tsy fitenenana na inona na inona loatra, ilay tsy fitarainana amin'ny zavatra tsy mety. Eny tsy fotoana iandrasana ny herin'olombelona na ny sainy intsony izao fa aleo ilay mahery noho ny olombelona no hiasa raha misy koa izany. Heveriko fa tsy hah
Dia ahoana moa hoy ny faran'ny hira teo? "Tahaka ny elatry ny fanantenana nahazo sidina" Elatra? nahazo sidina? satria tsy misy olona intsony mahatohitra ny sitrapony dia tahaka ny fambara amiko ihany raha toa ka misy ny olana madinidinika tamin'ilay "Elatra" nefa nahatonga azy ho tsy afa-nisidina tamin'ny fotoana heverina hiaingany. Eny tsy mahateny loatra intsony ny olona fa manara-baovao tsimoramora tahaka ny mahazatra ihany. Sa izay tokoa ilay hoe "Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina"? [Eksodosy 14:14]
Taperina ny rediredy fa efa lava izay aloha!